हाम्रो बारे - शिजियाजुआang्ग फोरभर ब्राइट ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
पीवीसी रेनकोट र पोन्चो
पीई रेनकोट र पोन्चो
ईवा रेनकोट र पोंचो
PEVA रेनकोट र पोंचो
शीज़ीयाजुआang फोरएभर ब्राइट ट्रेडिंग कं, लिमिटेड १० बर्ष भन्दा बढि विभिन्न प्रकारका जलरोधक उत्पादनहरूको लागि एक पेशेवर र दक्ष आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रो कम्पनी रेनकोटको निर्माण, स्वास्थ्य सेवा र आपूर्तिमा व्यस्त छ। हामी पुरुष रेनकोट, लेडीज रेन्कोट, किड्स रेनकोट, मेन जैकेट, विन्डब्रेकर, पीवीसी रेनकोट, ईवा रेनवेयर, पीई वर्षा पोंचो, एप्रन, सेफ्टी कपडा आदि आपूर्ति गर्न सक्छौं। हाम्रो सबै उत्पादनहरू उच्च स्तरको कच्चा माल प्रयोग गरी निर्मित हुन्छन्, विश्वसनीय उद्योगबाट प्राप्त गरिएको । हाम्रो उत्तम उत्पादन अत्यधिक प्रभावी टीम, उपभोक्ता व्यवस्थापन प्रणाली र गुणवत्ताको कठोर अनुकुल भावनाबाट आउँछ। हाम्रो उत्पादनहरू व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त र प्रयोगकर्ताहरू द्वारा विश्वास गरिएको छ र लगातार परिवर्तन हुने आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। हाम्रो पहिलो ग्राहकहरु अझै पनी हामी संग काम गरीरहेको छ! हामी उत्तम सेवा प्रदान गर्दैछौं र सावधानीपूर्वक गुणवत्ता नियन्त्रण गर्दै! हामी तपाईंसँगै बढ्दै छौं! अब हाम्रो वार्षिक बिक्री कारोबार २,०००,००,००० मा छ, हाम्रो मुख्य बजारहरूमा युरोप, उत्तर र दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, र एशिया समावेश छन् ...
हाम्रो पेशेवर रेनकोट कारखाना बाहेक, हामी अझै पनी आफ्नो प्रिन्टि house हाउस छौं। हाम्रो प्रिन्टिंग हाउस शीज़ीयाजुआang शहर, हेबै प्रान्तमा अवस्थित छ। हामीसँग se० सेट भन्दा बढी तातो सिलि machines मेशिनहरू, १० सेट्स जाल प्रिन्टिंग लाइनहरू र seसेट गर्मी ट्रान्सफर प्रिन्टिंग मेशिनहरू छन्। हामी प्रिन्टि experiencedमा अनुभवी छौं, हामी कुनै पनि प्रकारको सामग्री प्रिन्ट गर्न सक्दछौं जस्तै पॉलिस्टर, नायलन, पीवीसी, ईवा, पीई, पु, टीपीयू आदि। हामी जाल प्रिन्टिंग, सीएमवाइके प्रिन्टि,, तातो ट्रान्सफर प्रिन्टिंग, रिफ्लेक्टिभ सहित कुनै पनि प्रकारको प्रिन्टिंग डिजाइन प्रिन्ट गर्न सक्दछौं। प्रिन्टिंग, रंग प्रिन्टिंग र थ्रीडी प्रिन्टिंग।
हामी संसारभर बाट ग्राहक संग व्यापार सम्बन्ध स्थापित गर्न को लागी राम्रो मौका को मूल्य छ। यसमा हामी हाम्रो दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति द्वारा सक्दो गरिरहेका छौं। हाम्रो उद्देश्य सुरक्षा, उच्च प्रभावकारी र उच्च गुण हो। भविष्यको व्यवसायका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ, हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट सेवा र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं।
शीज़ीयाजुआang्ग फोरभर ब्राइट ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
नवीनता, कार्यात्मक, र ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा।
ठेगाना:एकाई4०4-90०5, रनक्सि Building भवन, नम्बर 555555 दक्षिण Youyi स्ट्रीट, शिजियाजुhu्ग, चीन
पेवा रेनकोट, पीभीसी पोंचो, वर्षा कोट महिला, पीभीसी रेनकोट, Kids Pu रेनकोट, पु रेनकोट,